Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Manchester City v Southampton. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Manchester City v Southampton.
Manchester City ayaa ku bilaabanaya horyaalka iyagoo difaacanaya, lakiin waxaa laga yaabaa inay dhaawac kaga maqnaadaan Joe Hart iyo Mario Balotelli, iyadoo labada ciyaaryahan ay seegeen kulankii saaxiibtinimo ee dalalkooda England iyo Italy bartamihii isbuucii hore.
Hart ayaase la filayaa inuu ka soo laaban doono dhaawac dhabarka ka soo gaaray lakiin goolhaye Costel Pantilimon ayaa diyaar u ah inuu ku soo bilowdo kulankiisii ugu horeeyay ee Premier League, halka Mario Balotelli ay u badan tahay inuusan ciyaari doonin ama ugu yaraan uu kursiga keydka soo fariisan doono.
Gareth Barry iyo Micah Richards ayaa iyagana ku maqnaan doona eerno iyo dhaawac cagta ah, lakiin ciyaartoyda badan ee kooxda joogta ayaa u ogolaaneysa City inay ku soo shirtagaan line-up xoogan.
Southampton ayaa ku bilaabaneysa kulankooda ugu horeeya Premier League xilli ciyaareedkaan tan iyo markii ay heerka labaad u laabteen, waxaana ay ka horimaanayaan City markii ugu horeysay muddo shan sanno ah.
Jack Cork ayaa ciyaari doonin ka dib dhaawac canqowga ka soo gaaray, lakiin tababare Nigel Adkins ayaa fursad siin doona Nathaniel Clyne, Steven Davis iyo Jay Rodriguez, kuwaasoo kooxda uga soo biiray kooxaha Crystal Palace, Rangers iyo Burnley.
Southampton ayaa wadahadal kula jirta Gaston Ramirez-ka kooxda Bologna, lakiin heshiiska ma dhameystiri doonaan ka hor kulankaan oo uma ciyaari karo.
Manchester City ayaa labo dhibcood kaliya ku weysay Etihad Stadium xilli ciyaareedkii hore.
Waxa ay marayaan 29 kulan oo Premier League ah oo aan looga badinin garoonkooda, iyadoo 27 ka mid ah ay guulo gaareen.
Waa kulan u dhaxeeya kooxo goolal badan soo dhaliyay xilli ciyaareedkii hore. City ayaa ku qaaday Premier League 93 gool, halka Southampton ay Championship ka soo dhalisay 85 gool.
Southampton ayaa laga yaabaa inay ku dhibtooto inay badisay kulankaan madaama kaliya Blackpool ay aheyd kooxda kaliya ee badisay kulankeedii ugu horeeyay xilli ciyaareed Premier League ah seddexdii sanno ee u danbeysay.
Si kastaba, 16kii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee ay kulmeen Southampton ayaa badisay 7 jeer, halka Manchester City ay badisay afar jeer kaliya.
Markii ugu danbeysay ee ciyaar heer sarre ah ay dhexmarto labadaan kooxood shan sanno ka hor.
Sadaal ka bixi kulanka dhexmaraya kooxda difaacaneysa Premier League iyo kooxda ku soo laabtay Premier League xilli ciyaareedkan?